HOGAAMIYAHA CUSUB EE ALSHABAAB AXMED DIIRIYE OO NOQDAY MAGAC UYAAL IYO KARATAY OO SI XEELADEYSAN ULA WAREEGAY HOGAANKA | Wardoon Wardoon.net - Somali News
HOGAAMIYAHA CUSUB EE ALSHABAAB AXMED DIIRIYE OO NOQDAY MAGAC UYAAL IYO KARATAY OO SI XEELADEYSAN ULA WAREEGAY HOGAANKA
Geeridii hogaanka Al-shabaab Axmed Cabdi Godane waxaa ay saraakiisha sare ee hogaankii geeriyooday aadka ugu dhawaa xilkaasi u magacaabeen Axmed Diiriye oo ahaan jiray uqaabilsanaha kooxda Gobolada Bay iyo Bakool, sidoo kalana ahaa ku xigeenkii Godane.
Axmed Diiriye ayaa kadib markii masuuliyadaan loo magacaabay waxaa uu ku xigeen u magacawday Mahad Karatey oo ah sarkaal katirsan saraakiishii sida aadka ah ugu dhawaa hogaankii hore ee Al-shabaab, waxaana jiray tuhmo ah in Karatey uu kadambeeyay dilkii Axmed Godane kaa oo hadal heyntiisu ay noqotay mid si weyn looga hadal hayay gudaha kooxda Al-shabaab,inkastoo markii dambe iska yaraatay.
Balse magacaabistaan ayaa hadana mar labaad meesha kasaartay in uu Karatay ahaa qofkii kadambeeyay dilkii ina Godane, waxaa sidoo kale jirtay rag 2-nin ahaa oo sida aan wararka ku helnay shacab ahaa in goob fagaara ah lagu dilay magaalada Baraawe, umaddii meesha timidna loo sheegay inay qirteen dambiga ahaa inay lacago ku qaateen bixinta macluumaad ku saabsanaa hogaanka Al-shabaab.
Majirin wax cadeyma ah oo intaa dhaafsiisan oo loo soo bandhigay ehelada iyo dhamaan shacabkii reer Baraawe oo aheyd halka ay ku fuliyeen xukunka dilka ah.
Axmed Diiriye ayaa markii loo magacaabay xilkii hogaanka Al-shabaab waxaa uu kulamo deg deg ah laqaatay madaxda ciidamada qeybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa Jabhadaha oo uu ku magacaawnaa Guure, oo ka tirsanaan jiray saraakiishii Xisbul Islaam ee ku biiray Al-shabaab, ahaana mas’uul ka qeyb qaatay dilkii culimadii lagu laayay magaalada Baraawe, sidoo kale waxuu ka mid ahaa shaqsiyaadkii kaalin fir fircoon ka qaatay dilkii Abuu Mansuur Al-amriki, iyo Mujaahidiintii lala dilay.
Shirarka uu Axmed Diiriye la qaatay hogaankan Al-shabaab qeybahooda kala duwan waxaa uu sidoo kale shir gaar ah la qaatay dhamaan madaxda kooxda Amniyaadka oo ah kooxda ugu shaqada badan Al-shabaab, kuwaa oo ka kooban qeybo kala duwan oo kala ah Istikhbaaraadka (Sahanka), fulinta , Mutafajiraadka (Kooxaha ku shaqada leh Qaraxyada), Muftiyiinta oo ah culimo gaar ah oo u fadwoota howlgalkoda waxaana ugu weyn nin lagu magacaabo Sheekh Diiriye, oo ah nin ku caan baxay fikirka Takfiirka.
Shirkaan oo qaatay waqti dheer waxaa kasoo baxay war murtiyeedka ah in howsha meesheeda laga sii wado, balse cida ay Amniyaadka dilayaan ay xukunto Maxkamad Sharci ah cadeymo ku filana loo keeno, marka laga hadlayo dadka aan dhulalka ay maamulaan Al-shabaab aan joogin ayagu warbixintooda oo sax ah lakeenaa sidaana looga go’aan gaaraa.
Arimahaan uu ka dhawaajiyay hogaanka cusub ee Al-shabaab waxaa ku qanci waayay dhamaan saraakiishii u caaboonaa inaan dhiiga gaalka iyo kan Muslimka lakala soocin, oo la wada xukumo cidii wax ku noqotana an loo istaagin.
Waxaana markiiba awoodii u wareegtay Mahad Karatey oo ay sheegeen inuu howsha asiga wadi doono Axmed Diiriyana kaliya uu ku magacaaban yahay hogaanka Al-shabaab, arintaan waxaa markiiba wal wal balaaran ka muujiyay saraakiisha Al-shabaab ee ladhacsanaa isbedelada uu Axmed Diiriye uu qorsheeyay.
Isbedeladii uu Axmed Diiriye qorsheeyay waxaa kamid ahaa in kooxda Amniyaadka ah ay joojiyaan Qaraxyada kadhacayay magaalada Marka, maadama ay ciidanka Amisom dhibaata xanuun badan reebtay kula kaceen caruur, dumar, iyo waayeel, kadib markii dhowr mar oo magaalada gudaheeda lagu Qarxiyay ay gumaad aan kala sooc laheyn ka geesteen magaalada Marka.
Hada waxaa maamulka kooxda si buuxda gacanta ugu haya Mahad Karatey oo si toos ah ay u hoos tagaan laamaha Amniga qeybahooda kala duwan, iyo kuwa Jabhadaha, Axmed Diiriye sida meesha kamuuqato arinkiisu kaliya waxaa uu noqday inuu Amiir u ahaado kooxda Dacwada, iyo ciidanka Xisbada kuwaa oo aan hada meel ay si rasmi ah uga howlgalaan ay yartahay maadaama inta badan dhulalkii ay maamulayeen laga qabsaday.
Hogaanka cusub ayaa waxaa uu taxaddar weyn uga jiraa in mar kale uu soo ifbaxo khilaaf u dhaxeeya dhexdooda, waxaana muuqaneysa in leysu tanaaasulayo inkastoo an la ogeyn illaa heerka ay gaarsiisantahay qanaacada dhexdooda ah.